Isizophelela ezithebeni zenkantolo eyaseMathulini – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Isizophelela ezithebeni zenkantolo eyaseMathulini
Ubukhosi News September 17, 2015
INkosi uBhekizizwe Luthuli
Kunokwesaba ukuthi ekugcineni inkantolo ingase inqume ukuthi asimbiwe isidumbu sikaMnu uFynn.
ESINWENI esejwayelekile ukuba khona komgcwabo kusho isiphetho somsebenzi. Lokhu kusuke kuwukuvala ikhasi elithile kudlulelwe kwelinye. Kwamanye amalungu akwaFynn ukufihlwa kwelinye lamathambo labo nenhloko yekhaya, uMnu uMorris Fynn akubanganjalo njengoba namuhla (ngoLwesihlanu) lo mndeni uzobe usenkantolo enkulu eMgungundlovu. Eceleni kwabo kuyobe kukhona inkosi yesizwe saseMathulini, uBhekizizwe Luthuli kanye nabeNgonyama Trust.
Lokhu kulandela ukubhuntsha kwezigxoxo ebezikhona phakathi kwalezi zinhlaka ngenhloso yokuxazulula udaba elingumvuka wendulo oluthinta ubukhosi bakwaLuthuli kanye nomndeni wakwaFynn.
Ngesonto eledlule oZul’azayithole babike kabanzi ngalokho okuqhathe lezi zinhlangothi nokuyinto eqinisekiswe ngamaphepha asenkantolo afakwe ngumndeni wakwaFynn. Emaphepheni aseNkantolo oZul’azayithole abawabonile umndeni wakwaFynn umi kwelokuthi unelungelo lokufihla ngoba ngokomlando yize umufi azalwa ngowe-1930 eWentworth (kuvela ukuthi amalungu omndeni wakhe asuka endaweni ngo-1926) indawo le ngeyabo ngokomlando abathi usuka ngezikhathi zeLembe. Le nkulumo icishe ifakazele leyo ekhulunywe yiNkosi uLuthuli ngesikhathi ekhuluma naleli phephandaba: “Ukubuya kwabo manje sebefuna ukuzongcwaba uMnu uMorris Fynn ngenye yezindlela zokufuna kusasa ebese behamba beyafaka izicelo kwabezomhlaba befuna ukuba banikezwe indawo okwakuhlala kuyo okhokho babo. Kuyaziwa futhi ukuthi uMnu uMorris Fynn bese sigijimisane naye ezinkantolo isikhati eside ethi ufuna ukubuyiselwa ubukhosi bakubo bamaKhaladi obungekho ngoba babakhiwe nguhulumeni wamaKoloni,’’ kusho inkosi uLuthuli.
Okuxakayo kulolu daba wukuthi kuyiwa enkantolo nje besekunemizamo yokungenelela kulolu daba. Ngokuthola kwaleli phephandaba kuthi isikhonzi senkantolo safika nencwadi emhlanganweni owawuhanjelwe nguMehluleli uJerome Ngwenya owayezolalelela iSILO kanye noMnu uNathi Mpungose owayemele uMnyango ophethwe nguMhlonishwa uNomusa Dube-Ncube. Ebuzwa ngalokhu uMnu uMpungose uthe: “Impela bengingomunye wabalamuli kodwa ngeke ngikwazi ukunika imininingwane ngoba angigunyaziwe ukukhuluma nabezindaba. Engingakwenza ngizocela okhulumela umnyango, uMnu uLennox Mabaso ukuba akuthinte,’’ kusho uMnu uMpungose.
Kanti noMahluleli uNgwenya naye kakuphikanga okokulamula: “ Ngokujutshwa yiSILO emuva kwesicelo esivele kuMphathiswa bengiseMathulini ngoLwesine, inhloso bekuwukuzolalela bese seluleka. Njengoba izwe lonke selazi sithe sisalalele kwabe sekuvela izindaba zokuthi isikhonzi senkantolo sesithumele amasamanisi, singasoli (isikhonzi) nje kuphela iNkosi uLuthuli kepha neSILO imbala ngoba phela uma ubopha iNgonyama Trust usuke ubopha ISILO uqobo. Kumqoka ukuthi abantu bakwazi ukuhlukanisa phakathi kweTrust kanye neBhodi leNgonyama Trust. ISILO siyiTrustee kanti iBhodi lona lingokunye. Uma ongithumile esebizelwe enkantolo angisenamandla mina ukuqhubeka nomsebenzi ebengithunywe wona,” kuphetha uMehluleli uNgwenya.
Loyo oyi Chief Executive Officer yeBhodi leNgonyama Trust, uDkt uFikisiwe Madlopha ukuqinisekisile ukuthi bayitholile incwadi ebabizela enkantolo. “Impela siwatholile amaphepha asibizela enkantolo kodwa ngeke ngikwazi ukunika imininingwane ngawo ngoba wudaba olusezithebeni zenkantolo,’’ kusho uDkt uMadlopha.
Emuva kokuphuma kwamasamanisi zonke izinhlangothi ziphikelele enkantolo phambi kukaMahluleli uNtshangase. NgoLwesihlanu lifike lahlehliswa icala ngoba ezinye izinhlangothi ebezimangalelwe zicele ukuwafundisisa amaphepha ngenhloso yokuwaphendula ngokuyikho. Lokhu kubukeke kuphazamisa izinhlelo zomndeni wakwaFynn ngoba wona ubucele ukuba inkantolo udaba iluthathe njengo‘luphuthumayo’ ngoba benesifiso sokufihla ngoMqgibelo. Ukuhlehla kwecala bekusho ukuthi nawo kawulinde nokuyinto engenzekanga ngoba ngoMgqibelo lishone uMnu uFynn esesenhlabathini.
Imizamo yokuhoxisa icala
OZul’azayithole bayakuqinisekisa ukuthi njengoba namuhla kuyiwa enkantolo nje kuke kwaba khona imizamo eyenziwe ngabameli bakwaFynn yokuhoxisa icala. Lokhu kulindeleke ukuba kuphikiswe ngabameli beBhodi leNgonyama Trust kanye naboMkhandlu waseMathulini ngelokuthi inkantolo ayikwazi ukuvuma ‘ukwedelelwa’ yilo mndeni.
Emaphepheni leli phephandaba eliwabonile inkantolo iyophoqeleka ukuba ibuke noma inqume odabeni lokuthi ngabe uMnu uFynn ufihlwe kulandelwa umthetho yini njengoba inkantolo ibisinqume ukuthi udaba aluzolalelwa namuhla. Lokhu kuzobukeka kuzobhekwa ngabomvu ngoba ezindaweni zamakhosi akufani nasemadolobheni lapho kuklanywe khona izindawo okuthiwa ngezokugcwaba. Okunye okuyomele inkantolo idlule kukho wukuthi lo mndeni awuyidelelanga noma uyisebenzise budedengu ukufeza izinhloso zayo njengoba phezu kokuthi kuyiwo oyise zonke izinhlangothi enkantolo sekuyiwo futhi ongasilandeli isinqumo senkantolo. Udaba lokuthi ngubani ozokhokhela izindleko zecala, okungabameli lalo lungase lususe ukukhuluma ngoba uma libalahla icala abakwaFynn bangase bazithole bekhokhela abameli babo kanjalo nalabo abamele inkosi uLuthuli kanye nabeNgonyama Trust. Omunye osondelene nomndeni kanye nohulumeni ongathandanga ukuba lishiwo igama lakhe ukuqinisekisile kuBAYEDE ukuthi abameli laba abamele umndeni bakhokhelwe nguhulumeni ngoba umndeni ubungeke ukwazi ukuba nemali yokukhokhela abameli.
Embikweni weBAYEDE kwavela ukuthi isijingi lesi sibondwe yincwadi evela emahhovisi eBhodi leNgonyama Trust, eMngungundlovu. Kule ncwadi eyabhalwa mhla zi-3 kuMandulo 2015 kwavela ukuthi leli iBhodi ‘kalinankinga‘ ekufihlweni kukaMnu uFynn endaweni yaseMathulini. Lokhu kulandela isinqumo seNkosi noMkhandlu wayo sokuthi uMnu uFynn angafihlwa endaweni ngenxa yomlando ongemuhle yena nesizwe saseMathulini anawo. Okwabe sekokhela umlilo kwaba ukuphinde kuvele enye incwadi evela kulo futhi ihhovisi leNgonyama Trust nayilapho loyo oyisikhulu esiphezulu incwadi yokuqala eyaphuma ngaye esezihlangula.
Encwadini yangomhla zi-4 kuMandulo 2015 uMnu uDuncan Pakkies ufunga ukuthi yena akazani nale ncwadi okuthiwa ibhalwe nguye. Nalolu daba lungase luhlaluke enkantolo ekuthini empeleni ngubani owabhala le ncwadi esiqhathe izwe.